Kooxda Chelsea oo Badisay iyo Manchester City oo Bareejo Lagu Celiyay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Chelsea ayaa labo dhibcood ku qabatay hogaanka horyaalka ingiriiska ee Premier League-ga,ka dib markii ay garoonkeeda Stamford Bridge 2-0 uga badisay kooxda Newcastle United.
Kooxda Chelsea ayaa goolka la hor martay,waxaana dhamaadkii qeybtiihore ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Oscar,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Diego Costa ayaa daqiiqadii 59-aad ee ciayarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Chelsea.
Ciyaaryahan Costa ayaa qabtay hogaanka gool dhalinta horyaalka ingiriiska,waxana uu dhaliyay goolkiisii 15-aad ee horyaalka.
Kooxda Chelsea ayaa horyaalka ingiriiska ee Premier League-ga ku hogaamineyso 49-dhibcood,halka kooxda Newcastle United ay horyaalka uga jirto kaalinta tobanaad,iyadoo leh 27-dhibcood.
Kooxda Everton ayaa garoonkeeda Goodison Park barbardhac 1-1 ah kula gashay kooxda Manchester City.
Kooxda Manchester City ayaa iska qasaarisay fursad ay isku dhibco ku noqon lahaayeen kooxda Chelsea.
Ciyaaryahan Fernandinho ayaa daqiiqadii 74-aad ee ciyaarta goolka u dhaliyay kooxda Manchester City.
Ciyaaryahan Steven Naismith ayaa daqiiqadii 78-aad ee ciyaarta goolka barbardhaca u dhaliyay kooxda Everton.
Ciyaaryahan Sergio Aguero ayaa mudo bil ka badan dhaawac uga maqnaa kooxda Manchester City ayaa bedel ku soo galay ciyaarta.
Kooxda Manchester City ayaa horyaalka ingiriiska ee Premier League-ga,waxana ay leedahay 47-dhibcood,halka kooxda Everton ay horyaalka uga jirto kaalinta 12-aad,iyadoo leh 22-dhibcood.
Kooxda Swansea City ayaa garoonkeeda Liberty Stadium barbardhac 1-1 ah kula gashay kooxda West Ham United.
Kooxda West Ham United ayaa goolka la hor martay,waxaana dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Andy Carroll,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Mark Noble ayaa daqiiqadii 74-aad ee ciyaarta gool barbardhaca ka dhaliyay kooxdiisa West Ham United.
Kooxda West Ham United ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta todobaad,waxana ay leedahay 33-dhibcood,halka kooxda Swansea City ay horyaalka uga jirto kaalinta sagaalaad,iyadoo leh 30-dhibcood.
Kooxda West Bromwich Albion ayaa garoonkeeda The Hawthorns 1-0 uga badisay kooxda Hull City.
Ciyaaryahan Saido Berahino ayaa daqiiqadii 77-aad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda West Bromwich Albion.
Tababaraha cusub ee kooxda West Bromwich Tony Pulis ayaa guushiisii ugu horeysay ee horyaalka la gaaray kooxda.
Kooxda West Bromwich Albion ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta 14-aad,waxana ay leedahay 21-dhibcood,halka kooxda Hull City ay horyaalka uga jirto kaalinta 17-aad,iyadoo leh 19-dhibcood.
Kooxda Burnley ayaa garooneeda Turf Moor 2-1 uga badisay Kooxda Queens Park Rangers.
Kooxda Burnley ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 12-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Scott Arfield.
Ciyaaryahan Charlie Austin ayaa daqiiqadii 33-aad ee ciyaarta gool barbardhac ah u dhaliyay kooxda Queens Park Rangers.
Ciyaaryahan Danny Ings ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Burnley,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Kooxda Burnley ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta 16-aad,waxana ay leedahay 20-dhibcood,halka kooxda Queens Park Rangers ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxda Leicester City ayaa garoonkeeda King Power Stadium 1-0 uga badisay kooxda Aston Villa.
Kooxda Leicester City ayaa goolka la hor martay,waxaana dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Paul Konchesky,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Matthew James ayaa dhamaadkii ciyaarta kaarka casaanka ah ka qaatay kooxda Leicester City,halka kooxda Aston Villa uu kaarka casaanka ah qaatay ciyaaryahan Ciaran Clark.
Kooxda Aston Villa ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta 13-aad,waxana ay leedahay 22-dhibcood,halka kooxda Leicester City ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee ugu hooseeya horyaalka ingiriiska.